7 Obodo kacha mma maka mmemme n'èzí na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Obodo kacha mma maka mmemme n'èzí na Europe
Ogige ntụrụndụ Green, hiking ụzọ ụkwụ n’ugwu, oge ihu igwe zuru oke zuru oke maka ịnwe ọ funụ n'èzí. Obodo obodo ndị dị na Europe nwere ihe niile ị nwere ike ịnwale maka ọrụ niile dị na mpụga Europe nwere inye. Site na igwe kwụ otu ebe na Amsterdam rue sọọsọ na Munich, ndị a 7 kacha mma obodo maka n'èzí-eme na Europe bụ ezigbo ezumike ebe.
1. Obodo kacha mma maka mmemme n'èzí na Europe: Amsterdam, Mba netherland
Mgbe a na-ewu obodo n’akụkụ ọwa mmiri, are ga-anọrịrị ezumike n'èzí. Amsterdam mara dị ka ndị kasị ịnyịnya ígwè-enyi na enyi obodo na Europe. Idingnyịnya ígwè abụghị naanị ụzọ ụgbọ njem kama ọ bụ ụzọ ndụ maka ndị obodo.
Gba ígwè bụ nnukwu ọrụ ije na Europe, maka ime njem na nlegharị anya. Nhọrọ ọzọ na-enyocha obodo n'ime ụgbọ mmiri, n'okpuru ọmarịcha àkwà mmiri na ihe owuwu nke Dutch. Nọ n'ụzọ, ị nwere ike ịrị elu maka mmiri ọ onụ boaụ na cafe ọzọ ma ọ bụ ụlọ oriri na ọmarịcha ụlọ n'akụkụ osimiri Amstel.
Igwe ohuru, acha anụnụ anụnụ, ma na-agbanwe ọdịdị ala na-eme ka ọnọdụ zuru oke maka ịnọ na-arụsi ọrụ ike ma na ọdịdị mgbe ezumike.
Switzerland nwere echiche kacha mma na Europe, na Geneva gbara ya gharịị. N'ihi ya, ndị obodo ahụ na-eme ihe kachasị mma na ala ndị gbara ha gburugburu, ịnọ n'èzí na-arụ ọrụ. Ọmụmaatụ, Lake Geneva, akpọrọ Lake Leman bụ ọkacha mmasị maka egwuregwu mmiri.
Atgbọ mmiri na-agba ịnyịnya, azu, njiko, igwu mmiri ma ọ bụ mgbapụ, bụ nanị ole na ole ihe omume ndị ị ga-eme n'Ọdọ Mmiri Geneva. Inwere ike ịgbazite ụgbọ mmiri ma ọ bụ were ego dị ọnụ njem ụgbọ mmiri.
Ọ bụrụ na ị bụ ugwu ugwu, mgbe ahụ ụzọ ụgbọ ala Switzerland Alps bụ njem dịpụrụ adịpụ site na obodo ahụ. Ugwu biking, hiking, maa ụlọikwuu, na egwuregwu sọọsọ n’oge mgbụsị akwụkwọ bụ nnukwu ihe omume n’èzí ga-eme na Geneva.
Lyon nye Geneva site na Ọzụzụ
3. Obodo kacha mma maka mmemme n'èzí na Europe: Munich, Germany
Munich bụ ụlọ nke otu n'ime ndị kasị ibu ogige ndị mepere emepe n'ụwa, Ubi Bekee. Ala ndị na-emebi emebi ma na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị mma maka arụ ọrụ n'èzí, si otú a na-etinye Munich na elu nke 7 obodo kachasị mma maka ọrụ na-eme na Europe.
N’ubi bekee, ị nwere ike ịnọsi ike, site n’ịgba ọsọ ma ọ bụ zuo ike, na a n’akụkụ mmiri, anwụ na-asa, na igwu mmiri. Ebe ọzọ dị mma maka ime ihe na-eme na Munich bụ osimiri Eisbach mere aka nwoke, n’ubi bekee. Ọ bụ ebe kachasị amasị ndị na-ebugharị ebugharị ebugharị ma na-eme mmegharị ha.
Nọrọ n’obodo ma ọ bụ n’aga n’obodo, Vienna bụ obodo dị egwu maka ọrụ na-eme na Europe. Isingfefe na Danube, ma ọ bụ na-aga n'èzí na-arụsi ọrụ ike na Lainzer Tiergarten ndoputa ihe, Vienna nwere ọtụtụ ihe omume ọpụpụ iji nye maka ụdị ndị njem ọ bụla.
Ọ bụrụ n’ikpebie ịnọ n’etiti, Otu n’ime ụzọ kachasị mma iji gaa njem nlegharị anya bụ site na njem Segway ma ọ bụ njem njem na mmiri Danube. ma, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgagharị Vienna dị ka mpaghara, na achọpụta ihe bara nnukwu uru, mgbe ahụ eke idobere zuru oke.
25 sq km nke oke ohia na anumanu nke anumanu na-eche gi n’ogbe kachasi mma na Vienna. Gagharịa, jog, ma obu nwee ahihia n’osisi ahihia a, ga-eme ka g Asụsụ Viennese ezumike zuru ezu.
5. Obodo kacha mma maka mmemme n'èzí na Europe: Zurich, Switzerland
Mgbe ọnụ ọnụ ugwu na ala ugwu Alpine dị, na ọdọ mmiri dị egwu na-aga n'ihu, are ga - abụ otu n’ime obodo kachasị mma maka ịme ihe omume n’obodo Europe. Zurich bụ obodo na-atọ ụtọ ma dịkwa egwu, ebe ị nwere ike ịga njem were ụgbọ oloko SZU gaa ụlọ elu nyocha. Ulo elu a na-ahụ anya dị na Uetilberg, ugwu ahụ mara mma nke obodo ahụ nwere nnukwu ọhụụ na gburugburu ya.
Ọ bụrụ na ị na-amasị hiking, mgbe ahụ ị ga-agbada n’etiti etiti site na ụzọ njem dị iche iche si Uetilberg. Nnukwu ọrụ dị n'èzí na Zurich bụ inwe anụrị n'akụkụ aka nri nke osimiri ahụ, na egwuregwu nke volley osimiri ma ọ bụ naanị zuo ike, na Flussbad Oberer Letten, ntụpọ nke ndị obodo.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ya dịka onye njem na Zurich, mgbe ahụ tinye n'ụgbọ mmiri maka njem maka Limmatschifffahrt nke ga-akpọrọ gị n'okpuru obodo 7 àkwà mmiri.
Interlaken gaa Zurich site na Train
Lucerne na Zurich site na Train
Lugano na Zurich site na Train
Geneva na Zurich site na Train
Na-agba ọsọ ma ọ bụ na-ekpori ndụ n'ụtụtụ, bụ otu n’ime ọrụ na-akpali akpali. Ọbụna mgbe ị nọ ezumike, na-arụsi ọrụ ike ma na-edozi ya akatabi okop mmade mpaghara ma na-azụtọ onwe gị. N'elu ihe a niile, ọnọdụ uche na-arụ ọrụ na-atọ gị ụtọ mgbe French Riviera na-akpali gị ma jiri ike na vitamin c.
Nice bụ obodo dị ịtụnanya maka ọrụ n'èzí na Europe. Anyịnya na-agba n’elu osimiri, igwu mmiri, na-achọ ime ụgbọ mmiri, na inwe pịanụ na ọdịda anyanwụ bụ ọrụ niile dị n'èzí iji nwee ọ enjoyụ n'ihe ndị French Riviera kacha mma.
7. Obodo kacha mma maka mmemme n'èzí na Europe: Florence, Italy
Florence bụ otu n'ime obodo mara mma na Italytali. Nwere ike ịchọpụta obodo dị ka niile njem nleta, ma ọ bụ n’ụzọ pụrụ iche ma bụrụ nke a na-agaghị echefu echefu. Kinggagharị ma ọ bụ ịgba ịnyịnya site na akara ala na ebe nlegharị anya bụ ihe abụọ dị mma na-eme n'èzí na Florence.
Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ihe omume pụrụ iche abụọ dị n'èzí, na ole na ole n'ime ihe omume kachasị mma n'èzí na Europe, wee nwaa ikuku ụgbọ elu na-ekpo ọkụ na mbara igwe. Nrụpụta ụlọ nke Florence na ogige ntụrụndụ na-atọ ụtọ na echiche si n'elu ga-ewepụ mmụọ gị n'ụzọ nkịtị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iti ìgwè mmadụ ndị njem nlegharị anya na ịnwa ime ihe omume ọhụụ, mgbe ahụ Florence bụ obodo dị ịtụnanya maka ọrụ na-eme na Europe.
Genoa na Florence site na ụgbọ oloko
Parma na Florence site na ụgbọ oloko
Milan na Florence site na Train
Venice na Florence site Train
Mmemme n'èzí Na Europe
Europe jupụtara na ihe ịtụnanya. N'agbanyeghị oge ole ị gawara Europe, a na-enwe njem ọhụụ. Anyị 7 obodo kachasị mma maka ọrụ na-eme na Europe bụ ihe dị mma maka ndị njem na ndị njem na-akpali akpali. Na mgbakwunye, ndị gị nke chọrọ naanị ịchọpụta ọmarịcha n'èzí na ọdịdị ala.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta ndị dị ọnụ ala ụgbọ okporo ígwè tiketi na nke ọ bụla n'ime ihe ndị a n'èzí.
You chọrọ Embed anyị blog post “7 Best Cities For Outdoor Activities In Europe” onto your site? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/cities-outdoor-activities-europe/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
eme frenchriviera outdoor OutdoorActivities Tranride Train Travel traintravelgermany travelitaly travelswitzerland TravelVienna